एकदम सम्भवतः सबैभन्दा खराब डोमेन रजिस्ट्रार | Martech Zone
आज बिहान हामी एक ग्राहक बाट एक उन्मत्त कल प्राप्त। हामीले उनीहरूसँगै नयाँ साइट विकास गर्न काम गरेको थियौं केही समय अघि, तर सबै अब अफलाईन थियो। केही क्रमबद्धको एक DNS मुद्दा। उनीहरूको आईटी केटाले हामीलाई केहि पनि परिवर्तन गरेको छ कि भनेर हेर्न फोन गर्नुभयो। हामीले तर यी समस्याहरू सुन्न सधैं घृणा गर्देनौं र उनीहरूलाई मुद्दा समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्न चाहन्थ्यौं।
कहिलेकाँही यो फाइलमा पुरानो क्रेडिट कार्ड भएको जत्तिकै सरल छ र डोमेनको समयावधि सकिन्छ। तर अन्य पटक, यो डोमेन रजिष्टाररको साथ वास्तविक समस्या हो। यस अवस्थामा, रजिस्ट्रार होस्टगेटर हो। हामीले उनीहरूसँग पहिले नै समस्याहरू भएका छौं हामी उनीहरूको समर्थन टोलीसँग काम नगरी कुनै DNS रेकर्डहरू सम्पादन गर्न असमर्थ छौं।
अद्यावधिक: दिनभर होस्टगेटर समर्थनको साथ कुरा गर्दा, यो एक सबैभन्दा ठूलो समस्या देखा पर्दछ कि होस्टगेटर वास्तवमै कुनै पनि डोमेन रजिस्ट्रार होईन। डोमेनहरू तेस्रो पार्टी मार्फत रेजिष्टर गरिएको छ, लन्चप्याड। त्यसोभए, जब तपाई सोच्नुहुन्छ कि तपाईले समर्थन पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाई वास्तवमै कसैसँग बोल्दै हुनुहुन्छ जोसँग तपाईको खातामा कुनै नियन्त्रण छैन।
हामीले हाम्रा ग्राहकहरुलाई डोमेन GoDaddy मा सार्न सल्लाह दियौं जहाँ हामी पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्न सक्दछौं।
तर आज बिहान, सबै साइटहरू समाधान गर्दैनन्। जब हामीले WHOIS खोजी गर्‍यौं, हामीले फेला पार्यौं कि नाम सर्भर परिवर्तन भएको थियो:
त्यसोभए, हामीले सेटिंग्स प्रमाणित गर्न होस्टगेटरमा लग इन गर्‍यौं र नेम सर्भरहरू ठीकसँग खातामा सेट गरियो। मैले ग्राहकलाई होस्टगेटरबाट रेकर्डमा भएको ईमेल ठेगानामा उनीहरूले प्राप्त गरेको कुनै पनि ईमेल फर्वार्ड गर्न भने। व्यवस्थापक ईमेल ठेगाना एक जीमेल ठेगाना हो जुन तिनीहरू दैनिक अनुगमन गर्दैनन्, साधारण अभ्यास।
होस्टगेटरबाट ईमेलहरू पढी सके पछि, हामी फेला पारेका छौं कि फाइलमा ईमेल ठेगाना प्रमाणित गर्न भनियो। यो मुद्दा भइरहेको घाव। किनकि ग्राहकले कहिले पनि फाइलमा ईमेल ठेगाना प्रमाणिकरण गरेको थिएन, होस्टगेटरले यसलाई आफैमा सर्भर गर्यो नेम सर्वरमा परिवर्तन गर्नका लागि NS1.VERIFICATION- होल्ड। SUSPENDED-DOMAIN.COM
एकदम इमान्दारीताका साथ, मैले आफ्नो जीवनमा यस्तो मूर्खतापूर्ण कुनै पनि कुरा कहिल्यै सुन्न पाइन। तपाईंले शाब्दिक रूपमा कम्पनीको साइटहरू र ईमेलहरू बन्द गर्नुभयो जब उनीहरूसँग भुक्तान गरिएको खाता छ ?! मैले देख्न सके कि यदि उनीहरूले आफ्नो बिल तिरेनन् भने, तर यो हास्यास्पद छ।
हामी यो टाउको दुखाउन समाप्त गर्न होस्टगेटरबाट GoDaddy मा डोमेन स्थानान्तरण द्रुत गर्दैछौं।
टैग: dnsडोमेन रजिस्ट्रारडोमेन दर्ताhostgator
सीएसएस हीरोको प्लगइनको साथ तपाईंको WordPress साइटमा CSS एनिमेसन थप्नुहोस्
कसरी राष्ट्रपति उम्मेद्वारहरू ईमेल मार्केटिंग प्रयोग गर्दैछन्
जुन 28, 2016 मा 1: 52 PM
के म तपाईंको कहानी reddit.com/r/talesfromcallcenters मा साझा गर्न सक्छु?
जुन 28, 2016 मा 1: 54 PM
तपाईलाई स्वागत छ भन्दा बढि!
जुन २,, २०१ बिहान :29:२२ बिहान
अर्को रजिस्ट्रारमा अर्को ग्राहकको साथ त्यस्तै कहानी थियो। तिनीहरूले अनुरोध गरे, ईमेल मार्फत, डोमेन र डोमेन को लागी व्यवस्थापक ईमेल पुष्टि गर्न। ग्राहकले सोचे कि यो स्पाम हो र कुनै प्रतिक्रिया छैन। त्यसैले हामीले खाता "अनलक" गर्नका लागि चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्‍यो। यो एक घण्टा भन्दा कममा हल भयो जुन हामीले यसलाई फेला पारेका थियौं, तर म सोचिरहेछु कि यदि यो बढ्ता प्रचलनमा बढ्दै गइरहेको छ भने।
यो वास्तवमै रोक्न आवश्यक छ। यदि मैले मेरो डोमेनलाई भुक्तान गरिसकेको छु भने कसैलाई पनि यसको नवीकरण नभएसम्म वा कुनै प्रकारको उल्लंघन प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन गर्ने अधिकार हुनुपर्दैन।
जुन 29, 2016 मा 10: 49 PM
मलाई लाग्छ कि मैले नयाँ नियमको बारेमा केहि देखेको छु। मैले यो goDaddy मा पनि देखें। तपाईंको ईमेलहरू प्रमाणित गर्नुहोस्।
जुलाई,, २०१ at 4::2016। बिहान
यदि तपाईंको कम्पनी वेबसाइट यति महत्त्वपूर्ण छ भने, तपाईं किन होस्टगेटरलाई पनि विचार गर्नुहुन्छ। तपाईले पाउनुभएको पैसा तपाईले पाउनुभयो।
कुनै श .्का छैन। यो एक ग्राहक थियो जुन हामीमा आएको थियो, हामीले होस्टगेटर चयन गरेनौं। हामीले त्यस पछि उनीहरूको डोमेनलाई एक विश्वसनीय रजिस्ट्रारमा होस्टगेटरबाट सार्यौं।